BitSeeds စျေး - အွန်လိုင်း XSEED ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BitSeeds (XSEED)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BitSeeds (XSEED) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BitSeeds ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BitSeeds တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BitSeeds များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BitSeedsXSEED သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.015BitSeedsXSEED သို့ ယူရိုEUR€0.0127BitSeedsXSEED သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0115BitSeedsXSEED သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0137BitSeedsXSEED သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.135BitSeedsXSEED သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0947BitSeedsXSEED သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.334BitSeedsXSEED သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0561BitSeedsXSEED သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0201BitSeedsXSEED သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0209BitSeedsXSEED သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.336BitSeedsXSEED သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.116BitSeedsXSEED သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0815BitSeedsXSEED သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.12BitSeedsXSEED သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2.53BitSeedsXSEED သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0206BitSeedsXSEED သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0227BitSeedsXSEED သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.467BitSeedsXSEED သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.104BitSeedsXSEED သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.59BitSeedsXSEED သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩17.77BitSeedsXSEED သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦5.8BitSeedsXSEED သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.1BitSeedsXSEED သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.415
BitSeedsXSEED သို့ BitcoinBTC0.000001 BitSeedsXSEED သို့ EthereumETH0.00004 BitSeedsXSEED သို့ LitecoinLTC0.000257 BitSeedsXSEED သို့ DigitalCashDASH0.000154 BitSeedsXSEED သို့ MoneroXMR0.000159 BitSeedsXSEED သို့ NxtNXT1.08 BitSeedsXSEED သို့ Ethereum ClassicETC0.00216 BitSeedsXSEED သို့ DogecoinDOGE4.31 BitSeedsXSEED သို့ ZCashZEC0.000162 BitSeedsXSEED သို့ BitsharesBTS0.568 BitSeedsXSEED သို့ DigiByteDGB0.515 BitSeedsXSEED သို့ RippleXRP0.0507 BitSeedsXSEED သို့ BitcoinDarkBTCD0.000498 BitSeedsXSEED သို့ PeerCoinPPC0.0483 BitSeedsXSEED သို့ CraigsCoinCRAIG6.58 BitSeedsXSEED သို့ BitstakeXBS0.616 BitSeedsXSEED သို့ PayCoinXPY0.252 BitSeedsXSEED သို့ ProsperCoinPRC1.81 BitSeedsXSEED သို့ YbCoinYBC0.000008 BitSeedsXSEED သို့ DarkKushDANK4.63 BitSeedsXSEED သို့ GiveCoinGIVE31.25 BitSeedsXSEED သို့ KoboCoinKOBO3.29 BitSeedsXSEED သို့ DarkTokenDT0.0138 BitSeedsXSEED သို့ CETUS CoinCETI41.66